We Fight We Win. -- " More than Media ": NLD ပြင်ဆင်လိုသောအကြောင်းအရာကို လွှတ်တော်တွင်းမှသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီပြင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ဥပဒေအကြံပေးက မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲတွင်ပြောကြား။
NLD ပြင်ဆင်လိုသောအကြောင်းအရာကို လွှတ်တော်တွင်းမှသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီပြင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ဥပဒေအကြံပေးက မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲတွင်ပြောကြား။
ဓါတ်ပုံ- Messenger News Journal
NLD ပါတီ က အခြေခံဥပဒေပါစာသားအချို့အား ပြင်ဆင်ပေးရန်တောင်ဆိုမှု အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာ နှင့် အထူးကိစ္စရပ်များေ လ့ လာဆန်းစစ်ရေးကော်မတီ ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဥပဒေအကြံပေးဦးသန်းမောင် က“ အခြေခံဥပဒေမှာဘယ်ဟာကိုတော့ ပြင်လို့မရဘူးဘယ်ဟာကိုတော့ပြင်လို့ရတယ်မခွဲထားပါဘူး မသင့်လျှော်ရင်ပြင်လို့ရတယ် ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးဘက်ကမကြည့်ဘဲ ဥပဒေကြောင်းအရပဲ ကြည့်ရင် ဒီစာသားကိုပြောင်းဖို့ အားလုံးကဆန္ဒရှိရင်တောင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေရှိပါတယ် ၊ အကြမ်းပြောရင်တောင် ဥပဒေအဖြစ်အရင်တင်ရမယ် နောက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတင်ရမယ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၀% ထောက်ခံမှ ဒီကိစ္စကိုလွှတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးလို့ရမှာ ဆွေးနွေးပြီးရင်တောင် မပြီးသေးဘူး နောက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပဲ ကိုစားလှယ်၇၅% ကထောက်ခံမှ ပြင်လို့ရမှာ အရင်ပြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာက နည်းဥပဒေကိုပြင်တာ အခြေခံဥပဒေမဟုတ်ဘူး ဒီကိစ္စတွေ က ဥပဒေကြောင်း ကိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပြင်လို့မရဘူးမဟုတ်ဘူး ရပါတယ် ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းပဲ ပြင်မှ ရမှာပါ တစ်ခြားနည်းမရှိပါဘူး”ဟု ယနေ့ပြုလုပ်သော မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာ နှင့် အထူးကိစ္စရပ်များေ လ့ လာဆန်းစစ်ရေးကော်မတီ တွင် နိုင်ငံတစ်ကာဥပဒေအကြံပေးများ အငြိမ်းစားသံအမတ်ကြီးများ ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ ၊ စီပွားရေးအကြံပေးများ ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များအပြင် ပြည်သူများ၏အခက်အခဲများကို တင်ပြပေးနိုင်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ၏ပြောကြားချက်အရသိရသည် ။
Messenger News Journsl
How about the promise 1990.NLD win and when NLD can not do for count,Daw Su said"I cant do it alone.If u want to get change,do it urself.Is that the leader speech?
Keep on doing.Wait at outside like 1990.After 20 years,rejoin the next election.Do u know to play the politics?
What is ur plan?If the goverment dont change the word,will u wait next 20 years or fight on the street?
25 April 2012 at 05:44